Astaamaha Power-Supply - Shiinaha BST (Hijmans) Industrial
Muuji Power Supply
PFC Bawdada Output
450W Output Single Mase Power Supply IRS-450w
125W Bawdada Output Mase Power Supply ITQ-125W
75W Output Dual Mase Power Supply IRD-75W
50W Output Triple Mase Power Supply ITT-50W
Waxaa jira dhowr sifooyinka awood-siin in saameyn ay shaqada:
Fakadaan: kala duwanaanshaha ee DC danab saarka sida shaqo waqti at danab joogto line, load, iyo heerkulka daarmayaay'e.
Jawaab Dynamic: Koronto A la shaqeeya waxaa laga yaabaa in hab halkaas oo ay jiraan shuruud in ay bixiyaan jawaab firfircoon u soomi isbedel xoog load. Taasi waxay noqon kartaa kiiska for load ee microprocessors-xawaaraha sare leh hawlaha awood-maamulka. Xaaladdan oo kale, microprocessor waxaa laga yaabaa in gobolka heegan iyo amarka waa in ay bilowdo ama isla markiiba dami, taas oo ku soo rogay hadda firfircoon sare iyadoo heerarka sagxada dhakhso on korontada ah. Si aad meel microprocessor ah, danab saarka sahayda ee waa soo gabagabeyso ama hoos gudahood ah oo waqti ku qeexan, laakiin aan lahayn overshoot xad-dhaaf ah.
Karti: Saamiga wax soo saarka-to-aqbasho awoodda (in boqolkiiba), qiyaasay at a siiyey load qaba xaaladaha line magacaaban (aan gafuurka / Pin) hadda.
Waqti Holdup: Waqtiga lagu jiro taas oo danab soo saarka korontada ee weli gudahood faahfaahinta soo socda khasaare ku yimaada awoodda aqbasho.
Inrush hadda: aqbasho Fiinta degdeg ah barbaro by korontada a at jeedin-ku hadda.
Heerarka International: Sheeg shuruudaha ammaanka korontada ee a iyo ogolyahay EMI heerarka (faragelinta electromagnetic).
Go'doon: -soociddiisa korontada dhexeeya iyo wixii soo baxayey ee korontada qiyaasay in volts ah. A non-go'doon uu leeyahay jidka DC dhexeeya iyo wixii soo baxayey ee sahayda, halka an korontada go'doon ka shaqeeya transformer ah in la baabi'iyo Jid DC inta u dhaxaysa talooyin iyo wax soo saarka.
Xeerarkii Line: Change in qiimaha danab saarka DC ka dhasha isbedel ku danab aqbasho ac, ku qeexan sida isbedelka ku dhacay ± MV ama ±%.
Xeerarkii Load: Change in qiimaha danab saarka DC ka dhasha isbedel ku load ka-wareeg u furan wax soo saarka ugu badan ee lagu qiimeeyo hadda, lagu qeexay sida isbedelka ku dhacay ± MV ama ±%.
Qaylada Output: Tani waxay dhici kartaa in korontada ee foomka of inay Cadha daraadeed gaaban tamarta inta jeer sare. Qaylada waxaa keena ku amraya oo gudanayay of capacitances dulinka gudahood korontada lagu jiro wareegga hawlgalka ay. Its Ilodanimada waa variable iyo ku xirnaan kartaa impedance load ah, shaandhaynta dibadda, iyo sida ay tahay cabbirka.
Goo danab Output: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
weecasho wakhtiyeysan iyo random (PARD): rabin wareegsan (Cabidkariin) ama aperiodic (qaylada) weecasho ee danab ku soo saarka awood-siin ka miraheeda magacaaban. PARD waxa lagu sheegay MV peak-to-peak ama RMS, at bandwidth a cayiman.
Ugu sarreysa hadda: badnaan hadda in korontada ah ku siin kara muddo kooban.
Awoodda ugu sarreysa: awoodda wax soo saarka The buuxda ugu badnaan in korontada ka soo saari kartaa iyada oo aan waxyeelo. Waxaa caadi ahaan waa si fiican u durugsan yahay awoodda awoodda wax soo saarka la isku halayn karo ee joogto ah iyo waa in la qabsiyada isticmaalo oo kaliya.
Horumarintooda Power-siin: xig xiga jeedin-on iyo off oo sahay awood yaabaa in loo baahdo in nidaamka la voltages hawlgalka badan. Taasi waa, voltages waa in la dalbadaa in isku xigxiga oo gaar ah, haddii kale nidaamka dhaawacmi kara. Tusaale ahaan, ka dib codsanaya danab ugu horeysay oo uu soo gaadho qiimaha gaar ah, danab labaad la soo dardar galisay karaa, iyo wixii la mid ah. Iskuxigida shaqeeya dambe marka korontada laga saaro, inkastoo xawaaraha ma aha sida caadiga ah sida badan oo dhibaato sida markeeda-on.
Remote on / off: Tan waxaa ka fadilnay wax shido in ay soo jeedin Koronto iyo off. Power-siin xog-sheet caddaymaha caadiga ah si faahfaahsan oo xuduudaheedu DC ee fog on / off, taxaya ku saabsan iyo off heerarka macquulka ah loo baahan yahay.
Dareen Remote: A korontada caadiga ah kormeera danab wax soo saarka iyo cunto siiya qayb ka mid ah dib u bixinta si ay u bixiyaan xeerka danab. Sidaas, haddii wax soo saarka waxay u egtahay inay kacaan ama dhici, feedback dejisa danab saarka sahayda ee. Si kastaba ha ahaatee, si ay u ilaaliyaan wax soo saarka joogta ah ee Xamuulka, korontada waa in si dhab ah loola socdo danab ee Xamuulka. Laakiin, xidhiidhada ka saarka korontada ee ah in ay load leeyihiin iska caabin ah oo hadda dal iyaga in ay soo saartaa dhibic danab in farqi u dhexeeya danab saarka sahayda iyo load dhabta ah a. Waayo, sharciyeynta fiicnayn, danab ka dib quudin jiray in ay korontada waa in ay ahaataa danab ku load dhabta ah. Laba (daray ama laga jaray) xidhiidhada dareen fog sahayda ee socdo danab ku load dhabta ah, qayb ka mid ah taas oo ka dibna dib u bixinta ku quudin jiray dhibic danab aad u yar, maxaa yeelay, hadda ka marayo labada xiriir dareen fog waa mid aad u yar. Taa awgeed, danab ku codsatay in load waxaa nidaaminaya.
Udhaqaajiyaa: Rectifying iyo dabaqii natiijada saarka saad Beddelashada awooda ee qayb ac (Cabidkariin) in u fuula, wax soo saarka DC ay. Inta jeer udhaqaajiyaa waa qaar badan oo muhiim ah oo soo noq-Beddelashada Converter ee, taas oo ku xiran topology Converter ah. Udhaqaajiyaa xad waa ay macneheedu tahay by load hadda, laakiin waa la yareyn karaa by shaandhaynta capacitor dibadda.
Raad: Marka la isticmaalayo sahay awood wax soo saarka badan ku dheehan yahay mid ama ka badan wax soo saarka kale raacaan isbeddello in line, load, iyo heerkulka, si kasta oo uu xusay in danab saarka saami la mid ah, gudahood dulqaad raadraaca ku qeexan, marka la eego qiimaha caadiga ah.
waqti Post: Apr-23-2018
Unit 406, Jinhui Building, Chenjiang Street Dhexe, Zhongkai Hi-tech Zone, Huizhou City, Gobolka Guangdong, Shiinaha.